Diyaargarawgu wuxuu ku socdaa xawaare buuxa oo loogu talagalay bauma CHINA 2020 | Runta Caalamka
Diyaargarawgu wuxuu ku socdaa xawaare buuxa oo loogu talagalay bauma CHINA 2020
Diyaargarowga bauma CHINA waxay ku socotaa xawaare buuxa. Carwada 10-aad ee ganacsiga caalamiga ah ee mashiinada dhismaha, mashiinada wax lagu dhiso, mashiinada macdan qodista, gawaarida dhismaha waxaa lagu qaban doonaa Noofembar 24 ilaa 27, 2020 xarunta Shanghai New International Expo Center (SNIEC).
Tan iyo markii la bilaabay 2002, bauma CHINA waxay noqotay midda ugu weyn uguna muhiimsan dhacdooyinka warshadaha ee Aasiya oo dhan. 3,350 carwooyin oo ka kala yimid 38 wadan iyo gobolada ayaa shirkadahooda iyo wax soo saarkooda ku soo bandhigay in ka badan 212,000 oo soo booqdeyaal ah oo ka yimid Aasiya iyo daafaha adduunka munaasabadii hore ee Noofembar 2018. Waxay durba u egtahay bauma CHINA 2020 inay sidoo kale qabsan doonto dhammaan goobtii bandhig ee la heli karo, isku darka ilaa 330,000 mitir murabac.“Tirooyinka diiwaangelinta ee hadda jirta ayaa si aad ah uga sarreeya kuwii ay xilligan ku sugnaayeen munaasabadii hore marka loo eego tirada alaabada la muujiyey iyo xaddiga goobta bannaan ee la dhigay,” ayuu yiri Agaasimaha Bandhigga Maritta Lepp.
Mawduucyada iyo horumarka
bauma CHINA waxay kusii socon doontaa wadadii ay horey u dhigtay bauma ee Munich marka laga hadlayo mowduucyada hada jira iyo horumarada hal-abuurka leh: Digitalizationka iyo otomatiga ayaa ah wadeyaasha ugu waaweyn ee horumarka warshadaha mashiinada dhismaha. Sidaas oo kale, mashiinnada caqliga yar iyo kuwa hooseeya iyo baabuurta leh xalalka dijitaalka ah ee isku dhafan ayaa si xoogan uga dhex muuqan doona bauma CHINA. Sare u qaadista horumarka tikniyoolajiyada ayaa sidoo kale la rajaynayaa iyada oo ay sabab u tahay adkaynta sii adkaynta heerarka baabuurta naaftada ah ee aan daruuriga ahayn, oo Shiinaha ay ku dhawaaqday in la soo bandhigi doono dhamaadka 2020. Mashiinnada dhismaha ee ka soo baxa heerarka cusub ayaa lagu soo bandhigi doonaa bauma. CHINA iyo cusboonaysiinta la midka ah ayaa loo bixin doonaa mashiinka duugga ah.
Gobolka iyo horumarka suuqa
Warshadaha dhismaha waxay sii wadayaan inay noqdaan mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee kobaca Shiinaha, diiwaangelinta kororka qiimaha wax soo saarka qeybta hore ee 2019 ee 7.2 boqolkiiba marka la barbar dhigo isla muddadaas sanadka ka hor (sanadka oo dhan 2018: +9.9 boqolkiiba). Iyada oo qayb ka ah tan, dawladda ayaa sii wadaysa fulinta tallaabooyinka kaabayaasha. UBS waxay saadaalinaysaa in, aakhirka, maalgashiga kaabayaasha dawladdu ay kor u kici doonaan in ka badan 10 boqolkiiba sanadka 2019. Ansixinta mashruucyada iyo kordhinta adeegsiga iskaashatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay (PPP) waa inay sii xoojiyaan horumarinta kaabayaasha.
Qaar ka mid ah aagagga diirada lagu saarayo kaabeyaasha kaabayaasha waxaa ka mid ah ballaarinta nidaamyada gaadiidka magaalada gudaheeda, adeegsiga magaalooyinka, gudbinta awoodda, mashaariicda deegaanka, saadka, 5G iyo mashaariicda kaabayaasha miyiga. Intaa waxaa sii dheer, warbixinadu waxay soo jeedinayaan in maalgashiga sirdoonka macmalka ah iyo internetka ee Waxyaabaha loo horumarin doono sidii“cusub” kaabayaasha dadaalka. Ballaarinta caadiga ah iyo casriyeynta waddooyinka, jidadka tareenka iyo safarada hawada ayaa ah mid sii soconaya iyada oo aan loo eegin.
Sidaas oo kale, warshadaha mashiinada dhismaha waxay mar kale diiwaan geliyeen tirooyin iibsi aad u cajiib ah mar kale sannadka 2018. Baahida koritaanka ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaysa warshadaha mashiinada dhismaha ee caalamiga ah. Soo dejinta mashiinada dhismaha guud ahaan waxay sare u kacday boqolkiiba 13.9 marka loo eego sanadkii hore ilaa $ 5.5 bilyan. Marka loo eego tirakoobka kastamyada Shiinaha, alaabada laga soo qaado Jarmalka waxaa lagu xisaabiyay dhoofinta alaabada oo wadar ahaan dhan $ 0.9 bilyan oo doollar, taasoo ah koror 12.1 ah marka loo eego sanadkii hore.
Ururka waxsoosaarka Shiinaha ayaa saadaaliyay in, dhamaadka, 2019 lagu tilmaami doono kobac xasilloon, in kasta oo uusan sidii hore ahayn. Waxa muuqata inay jirto isbeddel cad oo loogu talagalay beddelka maalgashiga oo dalabka ayaa u janjeera dhanka moodooyinka tayo sare leh.